China Sports gloss factory na ndị na - ebunye ya | qiangjing
Nkwado nkwonkwo ụkwụ
Mgbochi UV / mgbochi
Azu & Lumbar
Azu & Ubu
Nkwado Thigh & nwa ehi
Nkwado siri ike
Nkwado nke eriri
Ghaa n'ime ụlọ ọrụ mmepụta ihe
Kere oru otu
Nkọwapụta Dị mkpirikpi:
Egwuregwu uwe egwuregwu nwere ọrụ anọ bụ isi: 1.Na-slị. Jide aka na akụrụngwa ahụ mgbe ị na-eme ihe ọ bụla nke sweats aka. 2.Hand nchedo. Onweghi calluses na aka, karia aka nwanyi. 3. Ezi uche. Were ọgwụ mara dịka ọmụmaatụ, inwere ike nghọta karịa mgbe ị na-eyi uwe. 4. Mma ile anya. Glooves na - eme ka ahụ dị ugbu a abụrụla ngwa ọrụ.
Ziga anyi ozi email Budata ka PDF
Ogo: S, M, L ma ọ bụ nwere ike ịhazi ya
Agba: agba ojii ma ọ bụ nwee ike ịhazi ya
Ngwa: okenye na ụmụaka
Logo: nnyefe ọkụ, pvc lable.etc
OEM / ODM anabata
Ihe: neo Loose, nylon
Ọrụ: wepu mgbu azụ, dozigharị ọnọdụ ọjọọ
Nkọwapụta ngwaahịa dị nkenke:
Nkọwa nke ngwaahịa:
Enwere ọtụtụ uwe aka na ahịa, ọ dịkwa iche iche kwesịrị iji gwọọ mma. Mgbe ị na-eme mgbatị akụrụngwa dị elu, ịkwesịrị iji uwe mgbatị ahụ siri ike, dị ka ịkwanye ọkpọkọ dị arọ, ọ bụrụ na ị na-eji mkpuchi ahụike nkịtị, ọ ga-agwụ na ọnwa 1. Ọ bụrụ na ị na-eme mmega ahụ dị ala dị ka dumbbell, naanị ị ga-ahọrọ uwe mgbatị ahụ nwere akpụkpọ anụ n'ọbụ aka gị, akwa n'azụ aka gị, na akwa aka. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịme ihe ngosi, nka agha na egwuregwu ndị ọzọ, họrọ sọlfọ ahụ na-egbu maramara.
Jiri ihe ikuku na-eku ume iji zere ikpo oke nke ikpuchi uwe, akwa elu na-abụkarị ihe eji eme mmiri ma gbatakwa akwa. Akwa akwa nwere akwa eji esetịpụ ohere, elu njupụta. Yabụ, na-ejikarị mmiri na-eguzogide ikuku na uwe elu na ebumnuche pụrụ iche. A na-ejikarị ihe ndị na-enweghị mkpọda na anụ ahụ bụ isi, na-ejikarị akụkụ ndị na-egbochi mkpanaka aka, a na-ejikarị ngwa ngwa na-egbochi microfiber.
Mgbapụta ọgba tum tum: Ọ nwere otu nhọrọ dị ka uwe aka na igwe. Ọ nwere mgbanwe dị mma, anaghị egbochi ịrụ ọrụ, ọ dị mma maka etu aka gị dị, na-eyi uwe aka na-enweghị aka ma ọ bụ na-eji eriri carbon nwere eriri na azụ nke aka, iji wee kpuchido aka gị.
Kigba efe: Usoro niile nke sking na-adabere na mkpanaka ski, yabụ ihe achọrọ maka uwe aka dị elu. Ọbụghị naanị ka ị nọgide na-ekpo ọkụ na oyi, kamakwa ka ọ dị nro, na-eyi uwe na nke ịkpụ. A na-eji akwa akpụkpọ anụ na akwa ihe eji eme akwa na akwa akwa, kwesịrị ịhọrọ akwa ndị na-ezighi ezi. Mgbe snow na-adasị gị aka na mberede mgbe ị na-egwu mmiri, ọ na-agbaze ngwa ngwa na mmiri wee banye n'ime uwe, yabụ akwa dị na uwe ga-abụ ihe anaghị egbochi mmiri. Mgbe a na-agba ọsọ, a ga-agbazigharị ihe nkpuchi sọọsọ ya, yabụ, uwe mwụda skiiki kwesiri ịdị obosara ma kwesiri ikewapụ ya na mkpịsị aka ise maka ịrụ ọrụ dị mfe. Ọ bụrụ na nkwojiaka nke ogologo aka ogologo, ma nwee ike kpuchie cuff, a ga-echekwa nkwojiaka. Ọ bụrụ na -akọrọ akara na-agbanwe agbanwe, ọ nwere ike igbochi mbido snow. Ọ kachasị mma ịnwe paadi owu iji chebe ma nọgide na-ekpo ọkụ. Snowboarders nwere ike ịhọrọ uwe mkpịsị aka ise na mkpịsị aka abụọ, ugbu a, aka atọ dị mkpịsị aka aka na-ewu ewu na skiers. Ọ bụrụ na enwere ike, dozie ụzọ abụọ, arụmọrụ mmiri adịghị mma, ịnweghị ike iji aka gị ọsụsọ ga-eme ka uwe mmiri.
N'èzí: N'ihe omume ndị dị n'èzí, otu ụzọ aka aka dị n'èzí ga-arụ ọrụ dị mkpa na njem ịnyịnya ibu nke anụ ọhịa na ịrị elu ugwu. N’oge oyi na-abịanụ, n’ụbọchị oyi, ọkụ na akasi aka na-ekpebi nkasi obi nke mmadụ. Keysnyịnya ibu ndị na-adịghị achọ igbo na-achọ ụzọ mmiri ga-egbochi mmiri na iku ume, aka aka siri ike, mkpịsị aka na-agbanwe agbanwe, ma nwee ezigbo ọkụ.
Rtsdị Egwuregwu Ọmụmụ Gloves
Na ihe egwu nke n'ịnyịnya jaketị na-enweghị eriri?
Ighari, rid nwetụla mgbe ị dị ngụgụ, nhịlị, ma ọ bụ adịghị ike n'aka gị? Ọ bụrụ na azịza gị bụ EE, mgbe ahụ ị ga - ata ahụhụ nke iji aka gị mee ihe. Mara mmerụ ahụ egwuregwu a na-ahụkarị mgbe ị na-agba ịnyịnya ígwè n’oge. N'ezie, ọ bụrụhaala ndozi ngagharị na iji akụrụngwa nwere ike inyere gị aka ịnọ na mmerụ ahụ.
Site na nchekwa, ọ dị mkpa ikwu okwu banyere sọlfọ nke igwe. Vesnyịnya nke ịnya ụgbọ elu bụ gluu pụrụ iche maka ndị na-agba ígwè. Dabere n'ụdị anyịnya igwe dị iche iche, enwere ike ekewa ha n'ime uwe igwe kwụ otu ebe, sọlfọ okporo ụzọ na uwe elu. Ulo elu eji eme ihe maka egwu egwuregwu di egwu, ihe nlere bu ihe di nkpa banyere nchekwa nke aru na nke nkasi. Dabere na oge oge, enwere ọkara mkpịsị aka na mkpịsị aka zuru oke. Akụ nke nkwụ na-aka oke. Dabere na ọnọdụ na mmegharị dị iche iche, ihe ndị a na-eji eme nkwụ dịkwa iche. Dịka ọmụmaatụ, nkwụ maka anyịnya igwe na-adị gịrịgịrị karịa karịa nke galo maka ugwu anyị.
Ọ bụrụ na aka gị bụ aka dị larịị, na-enweghị aka aka ọrụ, a na-ebute nrụgide ahụ ozugbo na akwara isi nke isi mkpịsị aka ukwu, mkpịsị aka ntanetị, mkpịsị aka etiti na akụkụ nke mkpịsị aka mgbanaka ahụ, na-eme ka ọnụọgụ aka, mgbu aka, na adịghị ike, nke bụ ọgwụ A na-akpọ ọrịa mmachi Ọkpụkpụ mbọ aka. Njikọ aka ogologo oge nke akwara na-atụgharị uche nwere ike ime ka enweghị atụ nke isi mkpịsị aka ukwu, mkpịsị aka ntanetị, na mkpịsị aka etiti, atrophy muscle, na mgbu akwara na aka na-efegharị na ubu na nkwonkwo aka.
Ubọk-moto nwere ike inye nchebe mgbe ị daba n’ime ụgbọ ala, ma chebe kwa anyanwụ na oyi. Eledala obere uwe aka. Choicehọrọ ihe eji eme ihe maka aka a ga - adi iche dabaa na aka di iche. Dịka ọmụmaatụ, azụ nke aka na-abụkarị ihe dị iche iche dịka ikuku iku ume, ọsụsọ ọsụsọ, nchedo anwụ, na nchedo oyi akụkụ ahụ na-ekwusi ike na ọrụ nke shoproof, mgbochi-skid na uwe na-egbochi, imewe nke uwe aka bụ nchebara echiche na nlebara anya.
Yiri uwe elu mgbe ị na-agba ọgba tum tum na-enyere gị aka ịsụcha ọsụsọ, enweghị mkpọda, iku ume, ihe na-enweghị atụ, chebe nkwonkwo aka na aka. Mgbe ọgba tum tum a na-aga n'okirikiri, ọsọ na-achịkwa onye na-agba ya na ọgba tum tum ahụ, yabụ mgbochi skid na ujo dị mkpa. N'ihi na onye na-anya ya na-anọdụ ọdụ, na-ejide ihe dị iche na ịgba ịnyịnya, ọ na-eme ka nkwonkwo nkwojiaka nọrọ n'ọnọdụ enweghị ike ogologo oge. Ka oge na-aga, ọ nwere ike ibute ọrịa mmerụ ahụ. Ọrụ pụrụ iche nke ịnya igwe bụ iji belata nrụgide na nkwonkwo aka aka. Ọrụ nnabata nke aka nke aka aka nwere ike iwepụ mmeghachi omume nke aka ahụ n'oge ị na - agba, wee zere mmebi nke nkwụ, wee si otú a belata ike ọgwụgwụ na ịba ụba ihe nchekwa nke cyclist.
Nke gara aga: Nkwado Elbow
Osote: Bamboo unyi n'ikpere nkwado
Dee ozi gi ebea zitere anyi ya
Mgbaaka nkwonkwo ụkwụ
Ndozi akara mkpoko
Kedo akwa aka
Nkwado ikpere Silicone
Nkwado ukwu na ukwu
© nwebisiinka - 2010-2021: Ikike niile echekwabara.
Ndụmọdụ - Ngwaahịa dị ọkụ - Ebe nrụọrụ
Aha ya bụ William